အသက် ( ၃၀ ) ကျော် Single အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများကို ချစ်သူ နှင့်ချိန်းတွေ ့ဖုိ ့ခွင့်ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီ – XB Media Myanmar
Single အမျိုးသမီးလေးတွေ တရုတ်ကိုပြောင်းကြရအောင်နော် အမျိုးသမီးလား Singleလား အသက်၃၀ကျော်လား Singleအမျိုးသမီးလေးတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ပါပဲ။တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုက သူတို့ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးတွေကို ချစ်သူနှင့်ချိန်းတွေ့ရန်အတွက် ခွင့်ရင် တွေပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ Zhejian g ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီ၂ခုဖြစ်ပါတယ် Haungzhou Songcheng ဖျော်ဖြေရေးကု မ္ပဏီနဲ့ Haungzhou Songcheng ခရီးသွားလာရေးကုမ္ပဏီတို့က သူတို့ရဲ့Single ဝန် ထမ်း တွေကိုအပြင်ထွက်ပြီး ရောရောနှောနှော သွားလာစေချင်နေတာကြောင့် နှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်ရရက်ရှေ့မှာ ၈ရက်အပိုခွင့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်Singleအမျိုးသမီးတွေ ချိန်းတွေ့ဖို့ခွင့်ရက်ရပြီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ရဲ့ စည်းမဉ်းအသစ်ကို ဇန်နဝါရီ၂၁ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုထားပြီး Dinglan အလယ်တန်း ကျော င်းကလဲ “အချစ်ခွင့်ရက်ဆိုပြီး Singleဆရာမတွေနဲ့ ကလေးမရှိတဲ့ ဆရာမတွေကို ဇန်နဝါရီ ၁၅ရက်နေ့ကခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်” ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စီမံရေးပိုင်းတွေက Song Dynasty မြို့မှာပဲနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး ခရီးသွားတွေသွား လည်နေကြဖြစ်တဲ့ Hangzhuမှာရှိတဲ့ အနောက်ပိုင်းရေ ကန်နဲ့လဲနီးပါတယ် နေရာကတော့ Zhrijiangစီရင်စုဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပန်းခြံလဲဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၁၀၀၀ကျော် ရိုးရာသင်္ကန်း တွေဝတ်ကတည်းက ခရီးသွားတွေကို လည်ပတ်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်. အကျိုးခံစား ခွင့်ရမည့်သူတွေကတော့ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေဖြ စ်ရပါမယ်။လ က်မထပ်သေးရသူဖြစ်ရ မယ်.အသက်၃၀ကျော်ပြီး ရာထူးအမြင့်ပိုင်းတွေမဟုတ်ရပါဘူး သူတို့ကိုတော့ချိန်းတွေ ဖို့ရန်အတွက်ခွင့် ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်. ဘာကြောင်းများပါလဲ အသက်၃၀ကျော်နေတဲ့အမျိုး သမီးတွေကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ အပိုဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလို့ သတ်မှတ်နေကြပါတ ယ်. ဒီလို မျိုးလ က်မထက် ရသေးတဲ့ ၂၅နှစ်ကျော်က ၃၀ကျော်အမျိုးသမီးတွေကိုယောကျ်ားတွေ လိုလားမှု နည်းကျပါတယ်။
သူတို့အတွက်လဲ အချိန်တွေမကုန်ခင် အဆင့်တက်ရန်နဲ့အနားမှာတစ် ယောက်ယောက် ရှိဖို့လိုပါတယ်. ဒီ တော့အဓိကအလိုရှိတာကအမျိုးသမီးတွေ သူတို့ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ အာရုံ စိုက်ဖို့ရယ် နောင်လက်မထက်ရသေးတဲ့လူတွေ အရွယ်မလွန်ခင်မှာ လက်ထက်နိုင်ဖို့ရ ယ် ဖြ စ်ပါတယ်၂၀၁၅ခုနှစ်ကနေ ယနေ့အထိကမ္ဘာပေါ်မှာမှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသားS ingle အယောက်ပေါင်း ၂၀၀မီလျံကျော်ရှိပြီး ၂၀၁၃ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ နှစ်စဉ် လက်ထပ်မှုနှုန်းသိသိသာသာကိုလျော့ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်. ဒီအတွက်ကြောင့် အပိုခွင့်ရ က်တွေ ပေါင်းထည့်ပေးတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေဆီကကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်ချက် တွေကြား ရပြီး စိတ်အားထက်သန်မှုတွေလဲတွေရပါတယ် အခုဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ချိန်းတွေ့ဖို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လျောက်သွား ဖို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်မျှော် မှန်းထားတဲ့အရာ တွေကိုလုပ်ဖို့အ တွက် အချိန်ပိုလေးတွေရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။